Dowladda Turkiga oo ka naxsatay Xukumadda Kheyre & kaalmadi la siin jiray DF oo la joojiyay!
26 August, 2018 in Maqaallo by Super Admin
Dowladda Turkiga oo si joogta u taageri jirtay Dowladda Soomaaliya, kabani jirtay daqliga Dowladda Fedaraalka ayaa ka gaabsatay in ay dib u bilaawdo lacagtii labada milyan Dolar ee bil walba aay ku taageri jirtay Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda Xukumadda Fedaraalka Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Beyle oo kullan daqiiqado yar la yeeshay Wasiirka maaliyadda Dalka Turkiga xiligii uu la safray Madaxweyne Farmaajo ayaa loo sheegay in dowladda Turkiga ay dib ula soo xariiri doonto dowladda Soomaaliya iyada oo ku eedeysay Xukumadda Kheyre in la musuqay lacagtii ay sida walaaltinimada ah ugu deeqday Soomaaliya.
Dowladda Turkiga waxaa sidoo kale nasiib xumo ah in Soomaaliya lacag weydiisato sida dadka siyaasada falanqeeye tilaameen iyada oo dowladda Turkiga uu ku socdo dagaal dhaqaale.
Xukumadda R.waasare Xasan Cali Kheyre ayaa noqotay mid afka kaliya ka sheegta in aay la dagaalami doonto Musuq Maasuqqa, iyadoo dhaqaalo badan ku baxisa duminta Maamul gobaleedyada Dalka oo dhismahooda dhaqaale badan iyo dhib intuba laga soo maray .